We.com.mm - သြဂုတ်လမှာထွက်ရှိမယ့် Annabelle2Movie Review
သြဂုတ်လမှာထွက်ရှိမယ့် Annabelle2Movie Review
ဒီတစ်ခါမှာတော့ မကြာခင်မှာရုံတင်တော့မယ့် Annabelle2ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်...။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ဒါရိုက်တာ David F.Sandberg ရိုက်ကူးတာဖြစ်ပြီး...၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူကတော့ Gary Dauberman ရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ Stephanie Sigman, Anthony Lapaglia, Muranda Otto တို့ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်...။ လာမယ့် သြဂုတ်လမှာရုံတင်မယ်လို့သိရပါတယ်…။ ဒီ Trailer အသစ်မှာ ပရိတ်သတ်တွေကို သတိပေးလိုက်တာတစ်ခုကတော့ အရင် Annabelle တုန်းက အရုပ်မလေးပြန်လာပြီ ဆိုတာပါပဲ…။
Annabelle2မှာ ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်တွေက အရင် Annabelle ကထက်ပိုပြီးတော့ ထိတ်လန့်စရာကောင်းနေမှာပါ…။ ၂မိနစ်ကျော်လောက်ပဲရှိတဲ့ Annabelle2Trailer မှာတောင် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံဖွယ်ကောင်းနေပါတယ်...။
ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာ စုံတွဲတစ်တွဲရဲ့ သမီးကကားတိုက်ပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်…။ ဒီစုံတွဲက သေဆုံးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့သမီးလေးကို ပြန်မြင်ရဖို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတာပါ…။ သူတို့သမီးလေးက အရုပ်ထဲကိုဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့ ဝင်နေခဲ့ပါတယ်…။ ဒါပေမယ့်သူတို့သတိထားမိသွားတာက အရုပ်ထဲမှာဝင်နေတာ သူတို့သမီးလေးမဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ…။ ဒီတော့ သူတို့အရုပ်ကိုထားခဲ့ပြီး ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်…။ နောက်ထပ်ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ ကောင်မလေးကို အရုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်က စာတိုလေးတွေပေးပြီးလိုက်ရှာခိုင်းခဲ့ပါတယ်…။ ကောင်မလေးက ဝိညာဉ်ဝင်နေတဲ့အရုပ်ကို တွေ့သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ? သြဂုတ်လမှာ ရုပ်ရှင်ရုံက ပိတ်ကားတွေပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်...။
Taylor Swift ရဲ့ကြောင်လေး ဘယ်သူဖြစ်ချင်လဲ?
K Pop လောကရဲ့အတောက်ပဆုံး ဖြစ်လာဦးမယ့် TWICE
ပရိသတ်တွေ မမေ့တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ဟာသအနုပညာရှင် (၃) ဦး
ပုနေတဲ့ အရပ်ကို ရှည်ချင်လွန်းလို့ ခြေထောက်ချိုးပြီး ကုသခွဲစိတ်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
ဟယ်ရီပေါ်တာမင်းသမီးလေး အမ်မာဝပ်ဆန်နဲ့ ဒိတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကောင်လေး (၇) ယောက်
သင့်ကို ၁၀ နှစ်လောက် ငယ်ရွယ်သွားစေမယ့် ဆံပင်ပုံစံ ၅ မျိုး